चिट्� ी आमालाई
शेखर ढुङेल, (क्यालिफोर्निया)
नेपाल आमा साष्टाँग दण्डवत,
फोन मा हिजै कुरा त भाको हो तिम्रा धेरै कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन कुरा गर्दा गर्दै तिम्रो बिजुली प्रसाद छोरो सुत्यो कि दुरसंचार प्रसाद यो फोन नम्बर मा फोन गर्न निशेध गरिएको छ भनी लाइन काटियो । तिमी निरास होउली भनेर यो चिट्� ी लेख्दै छु । हुलाकी छोराले नहराइ हड़ताल नगरि बेलै मा पुर्याइ देला भन्ने आसा राखेको छु ।
तिमी भन्न खोज्दै थियौ क्यारे अँग अंग मा पिडा छ । कतै पोलेको, कतै काटेको घाऊ शरीर भरी छरे, के गर्दछ्योउ त म टाढा छु ,तन मन पल पल मा तिमी नै माथि छ । तैपनी त्यस्को के अर्थ लाग्दछ र ? मैले आसुँ पुछ्न नखोजेको होइन । तिम्रो बाँकी क्रान्तिकारी सन्तानले 'ए छाड् हामी गर्छो सेवा' भनी मलाई धकेले । अहिले तिनीहरु तिम्रो आस्तिव नै नमान्ने भाका छन रे, तिम्रो जन्म दिन पनि नमनाउने भनी एक मत भएका छन रे ?तिम्रो पुर्खा ले बनाएको पात्रो पनि फ्याकेर उधारो मा कता को हो नयाँ पात्रो लेराउने रे । तिमी लाई टुक्रा टुक्रा पारी आफ्नो आफ्नो नाममा लेखाउने सल्लाह गर्दै छन रे । तिम्रै छोराहरु लाखों लाख छिमेकीलाई तिम्रै सन्तान हुन भनी तिम्रो नाम को नागरिकता पनि दिएरे । ती नव सन्तान आफ्नै चेली बेटी को आस्मिता माथि अत्याचार गर्दै छन रे । ती सन्तान अझै बन्दुक र भाला बोकी तिमी सित के के माग्दै छन रे ।
बडो माया गर्ने भाको मलाई छोडि सात समुन्द्र पारी पुगिस तेरा सन्तान लिएर भन्दी होउली तिमी । तिम्रा कुरा पनि � िक्कै हो । मेरा पनि कुरा सुन आमा जसरी झरना बग्द्छ अबिरल माथिबाट मुनी, त्यसै गरी माया पनि बग्दो रैछ माथिबाट मुनी । तिम्रा माया ममा मेरो माया सन्तान मा । माया साचीकै झरना जस्तै एकोहोरो हुँदो रेछ, तिमी मलाई फटाहा गफाडि मोरा भन्दी होउली । के गर्छेउ त तिम्रा सन्तान दक्षिण एसिया कै गफाडि नम्बर एकमा गनिदा रेछन । यस्तै बिधी को नियम रेछ म पनि बान्धिए के गर्छेउ रोएर तिमी? मलाई थाहा छ तिम्रो रिन तिर्नु छ । कहिलेकाही प� ाइ देको आङ ढाक्ने लत्ता र घर खर्च पनि खोसी लगे भन्छेउ । आमा, तिमी अब कहिले � ीक हुन्छेउ ? कहिले तदुरुस्त हुन्छेउ ? कहिले बन्द गर्लान भाई भाई ले काट्ने मार्ने काम ? कहिले रोकिएला तिम्रो आँखाको आसुँ बग्ने क्रम ? तिम्रो काखमा उफ्रने क्रान्तिपुत्रहरुले तिम्रो घाऊ निको पार्लान् ? तिनलाई सम्झाउन खोजे आमा घाटी नै मर्काइ दिउ भन्छन । तिम्रो नाममा हज्जार अरब को रिन लिएका छन खोइ तिम्रो आङ खाली नै छ । मन त झनै फाटेको छ रे ।
यो चिट्� ी त लेखे, तर बुझ्छेउ कि ? कसैले पड्दे सिधै उल्टो अर्थ लगाई देला कि मलाई थाहा छैन । एक त तिम्रो आँखा धमिलो, त्यस माथि पनि बिजुली प्रशाद को १४ घण्टाको सुताइ कुन बेला कस्ले पडिदेला यो चिट्� ी ? अस्ती कता हो सुरु गर्या रे भोली पल्ट मेसिन बिग्र्यो रे । तिमीलाई नयाँ बनाउछु भन्दै छन । कतै तिम्रो नाम नै फेरिदिने त होइनन भन्ने चिन्ता लागेको छ । आमा कहिलेकाही तिमीलाई भेटन आउँदा छिमेकी लाई सोध्नु पर्ने होकी मेरो आमा कता बस्नु हुन्छ हं भनी।
बुढा सन्तानले त गरेनन गरेनन लक्का प� ्हाहरुलेपनि तिम्रो मल्हम पटि गर्न जानेनन । तिमिले जानी जानी यस्ता झगडालु सन्तान जन्माएकी त पक्कै होइनोउ । कुन वल्ला घरे पल्ला घरे छिमेकीले तिम्रा सन्तान को दिमागमा के को धुलो हालीदिए कुन्नी शांत कहिलेही हुँदैनन । के आपस मा लड्या लडै छन । तिमी नै भन त म त्या आएर के गरु ? तिम्रो वरिपरि बसेर सेवा गर्छु भन्ने अरु भाईको कुरा सुन्छु कुट्ने, घर नै भत्काइ देको खबर सुन्छु । मैले यहाँबाट नै सबै खबर पाको छु, तोड्फोदको फोटा हेर्या छु । गरी खाउ भनी दयालु छिमेकी ले बनाइ देको कल कारखाना पनि नयाँ बनाउनेरे भनी तोड्फोद र बन्द भै राखेखा छन रे । खोइ आमा साउने झरी जस्तो तिम्रो आसुँ कहिले कस्ले पुछने हो ? तिमीलाई सताउने छिमेकी आज तिम्रो सेवा गर्छु भनी तिम्रा सन्तान लाई फकाउ दै पो छ रे ? तिम्रो सेवा गर्छु भनी बसेका दुई चार सन्तानपनि एक आपसमा लडेर शिथिल् भैसके । मायाको स्वाङ् पार्ने धुरन्धरहरु तिम्रो काख छोडि टाढा टाढा भागी सकेका छन । तिमिले भन्न सक्दछेउ गोहीको आँसु नझार मोरा भनेर तर के गर्नु तिमीलाई नसम्झी बस्न पनि त सक्दिन । जिउदो छऊन्जेल कम्सेकम् चिन्ता सम्मन त गर्छु ? भुलेको त छैन नि ?
फेरी तिमी सोच्दि होउली म भने यहाँ मस्तीमा छु त्यस्तो छैन आमा । त्यहा तिमीलाई जस्तै यहाँ मलाई पनि मन दुखेको छ त्यहा बाट सुख खोज्न आई पुगेका सन्तानको त्यहाको तुषले छोड्न सकेको छैन एउटा भन्छ मेरो झन्डा बोक आर्को भन्छ मेरो झन्डा बोक । म भन्छु हामी एउटै आमाका सन्तान होउ तिम्रै नामको मात्र झन्डा बोकुं । उनिहरु मलाई नचिने झै गर्छन् । बेलाबेलामा छूटाछुटै भोज गर्दछन । मलाई कसैले बोलाउदैनन् । मपनि नेपाल आमा कै सन्तान हुनी मलाई चिन्दैनोउ भन्छु । सबै भन्दछन् तैले किन हाम्रो झन्डा बोकिनस ? तिम्रो सन्तानलाई यो के भाको आमा जहाँ पुगे पनि बिबाद मात्रै गर्दछन । म त एक्लो व्रृहस्पती भाको छु । कसैको झन्डा नबोक्दा तिन्का आँखा को कसिङर् पो भाको छु । तिम्रो मातृत्वले नतानेको होइन तिम्रो पिडा नबुझेको होइन । स्वाभिमानी बन्नु भन्ने तिम्रो आसिरबाद बिर्सेंको पनि छैन त्यही स्वाभिमान ले कता कता मलाई छुचो पनि बनाएको छ । सबै कुरो बुझेर पनि स्वार्थी बनी बाँचेको छु मुगलान मा । न मरी बांचे काल ले सांचे तिमीलाई मल्हम पटी गर्न म आउँला एक दिन म ।
आज लाई बिदा पाउ तिम्रो अभागि मुगलाने छोरो